Ginger Plant: Na-agbakwunye ihe na-esi ísì ụtọ n’ubi gị - Ọgwụ
Ginger Plant: Na-agbakwunye ihe na-esi ísì ụtọ n’ubi gị
Ntuziaka Nlekọta Ọsọ
Ihe Banyere Ginger
Ebe A Ga-akụ
Olee otú osisi
Osisi ginger na-eto
Anyanwụ na Okpomọkụ
Owuwe ihe ubi na ịchekwa
Nsogbu Na-arị Elu
Jinja bụ ahịhịa dị ike, nke na-egbochi mkpali nke ejirila na ụwa nri kemgbe ọtụtụ narị afọ. Osisi ginger na-etolite site na rhizome nke na-eto eto, na-eto obere ifuru. Ọ bụrụ n’ịchọrọ igbakwunye ekpomeekpo na ịma mma n’ogige nri gị, ginger na-eto bụ ihe zuru oke.
Jinja nwere ọtụtụ uru ahụ ike ma jiri ya dị ka ọgwụ ogwu kemgbe narị afọ nke 16. Osisi ahụ na-enye ahụ efe ngwa ngwa site na afọ mgbu, ọgbụgbọ, ma nwee ike belata mgbaàmà oyi na flu. N'ezie, ginger bụ ezigbo ebumnuche, ahịhịa na-agbanwe agbanwe nke kwesịrị inweta ebe n'ubi gị.
Guo maka ntuzi aka anyi di omimi banyere otu esi echekwa ma jigide osisi ginger!
Lawn sweeper maka ịnya ahịhịa
Nnukwu Ngwaahịa Maka Ginger:
Branddị Ngwá Ọrụ Na-adị Ndụ nke Dị Mkpa na Pyrethrin
Natures Ezi Gumụaka Bara Uru Nematodes
Ogige Ọrịa Serenade Ogige
Osisi ginger na-emeputa rhizomes na nkpuru ahihia mara mma.
Aha (s) Common ginger, esi nri ginger
Aha sayensị Zingiber officinale
Tobọchị Owuwe Ihe Ubi 8-10 ọnwa
Ìhè Nlekọta anya
Mmiri: Nọgidenụ na-mmiri ala ma ọ bụghị soggy
Ala Aja ma ọ bụ ala ahịhịa juru nke ọma
Fatịlaịza 5-5-5 kwa onye nkwanye nkwanye
Pests Chinese rose ebe, mgbọrọgwụ eriri nematodes, aphids, ahụhụ ahụhụ, mealybugs, thrips, uhie ududo uhie, cutworms ,world armyms, caterpillars, ero gnats
Ọrịa Nje nje bacteria, mgbọrọgwụ ire ere
Jinja bụ osisi na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ nke na-aga n'aha botanical, 'Zingiber officinale'. A na-amakwa osisi ginger dị ka ginger na isi nri.
Zingiber officinale bụ nke ezinụlọ 'Zingiberaceae' - otu ezinụlọ dị ka cardamom na turmeric. A na-eto ahịhịa a na India, Haiti, Nigeria, na United States, ọkachasị Hawaii. Ma gịnị banyere ginger? Ọ bụ onye nwe ala na mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ Asia.
Oge a na - eto eto nwere ike itolite na 3-4 ruo ogologo ma nwee ọmarịcha nkọ na akwụkwọ dị mkpụmkpụ nke dị site na sentimita 6-12. Mgbọrọgwụ nke na-agbatị site na rhizomes bụ agba aja aja na mgbagwoju anya na ihe dịka sentimita 2-6 n'ogologo.
The rhizomes branched bụ nke gbara ọkpụrụkpụ na warty nwere nnukwu ọla edo na anụ aja aja. Enwere ike ịkpụcha akpụkpọ ahụ ma ọ bụ wepụ ya. Anụ nke mgbọrọgwụ bụ icha mmirimmiri edo edo ma nwee citrusy isi dị ka nke lemọn. Mgbọrọgwụ ginger na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ.
Rhizom na-eto eto na-enwekarị ụtọ dị nro, mana ka ha na-etolite ma na-etolite, ha na-aghọ ihe fibrous na-atọ ụtọ. Mgbọrọgwụ ginger na-eri nri nwere ọtụtụ ogige na-enweghị isi na nke na-enweghị isi na-esi ísì ụtọ.
Ọtụtụ ndị na-ajụ, 'ginger bụ mgbọrọgwụ?' N'adịghị ka nkwenkwe ndị a ma ama, ginger bụ n'ezie rhizome. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-eto eto ginger, ị nwere ike ịtụ anya ogologo mgbọrọgwụ ogologo oge yiri ka ọ na-apụta site na rhizomes nke na-agbasa na ụdị mpụga.
Ome nke ginger perennial na-egosi dị ka ị ga ma ọ bụ n'ezie akwụkwọ mpempe akwụkwọ nke a na-ekekọta ibe ya. Akwụkwọ nke osisi ahụ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma dị ogologo ma dị warara. A na-ahazi ha abụọ ụzọ abụọ n'akụkụ nke ọ bụla.
Ginger na-eto eto nwere ike bụrụ ihe na-atọ ụtọ n'ihi na ọ na-ewepụtakwa okooko osisi na mpempe akwụkwọ. Okooko osisi ndị a na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na odo odo na ntọala odo odo. A na-eji uhie uhie na-acha uhie uhie na-acha odo odo nke mara ezigbo mma mgbe ha na-ama ifuru.
Mgbe a kụrụ otu nke rhizome na-etolite, ọ nwere ike were ọnwa 8-10 iji topụta rhizomes ahụ, emesịa enwere ike ịghọrọ ya nke ọma. Mgbe ị kụsịrị akụkụ ginger gị, ị ga-amalite ịhụ na-epupụta n'ime izu 4-6.
Ọtụtụ ndị na-eji ginger ọhụrụ agbakwunye na nri ha na isi. Enwere ike iji jinja mee nri, sie teas, na biya ginger na ginger ale. A na-ejikarị ginger ọhụrụ mee ihe n'ọtụtụ nri maka agbụrụ ya dị nkọ.
Nta nke nkpuru ginger gha aru oru dika ihe ha gha eme.
Ma ị na-etolite ginger n'ime ụlọ ma ọ bụ chọọ ịnabata ha n'ubi gị, osisi ndị a dị nnọọ mfe ilekọta na ilekọta. Ma dika okpomoku, ha nwere onodu puru iche ha choro!
Mgbe ị na-eto site na mkpụrụ ginger (nke a na-akpọkwa akụkụ rhizome), mee ka mkpụrụ gị malite n'isi. Ga - achọ ịmị mkpụrụ osisi gị n’èzí site na mbubreyo February rue mbido Eprel, ọ ga - ewe oge tupu ha epupụta ma bido ịmalite.
Mgbe ị na-akụ ginger, ọ chọrọ ala ọkụ ka ọ tolite nke ọma. 50 degrees Fahrenheit bụ ala kachasị dị ala maka mmepe.
Ọ bụrụ na ị na-eto ginger na akpa, dobe ya n’ebe na-ekpo ọkụ ruo mgbe ntu oyi gafere. Nke a na - eme ka mgbọrọgwụ ginger nwee ike ime onwe ha ngwa ngwa mgbe ha na - apụ apụ. Ìhè na-eto eto nwere ike inye ọkụ ma ọkụ.
Ginger rhizome bụ ihe ijuanya siri. Ikpebi ebe ị ga-akụ dị ezigbo mkpa. Buru n’uche na ọ bụrụ na ihu igwe dị oke oyi maka ebe okpomọkụ a, ị nwere ike iji ihe mgbe niile wee bugharịa ha n’ime ụlọ.
Na gburugburu ebe obibi ya, ginger na-eto nke ọma na ebe a na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ dịka ọhịa nke nwere ìhè anyanwụ nke na-ehichapụ osisi. Gbalịa ị mimomi gburugburu ebe obibi ya dị ka o kwere mee. Họrọ ebe ị nwere ike ịkwadebe ma tọpụ ala ahụ na omimi nke 8-10 sentimita asatọ, yana ohere ịgbasa.
Bido site na ịmị mkpụrụ rhizomes gị n'abalị n'abalị n'ime mmiri okpomọkụ. Nke a na - eme ka ginger rhizomes rụọ ọrụ ma bido ime ka ha dịghachi ndụ. Supermarket ginger na-enwekarị uto ihe na-agbapụta na ya, mana ọ bụrụ na ị nwere mpempe akwụkwọ ochie nke malitere itolite, enwere ike ịgha ya.
Kụrụ rhizomes gị ma ọ dịkarịa ala 3 sentimita asatọ miri emi na ihe dị ka sentimita asatọ. Ọ bụrụ na enwere mkpuru akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, gbaa mbọ hụ na ha gbadoro ụkwụ n’elu ala. Ọ bụrụ na ịmalite ha n'ime akpa, ịnwere ike idowe ya na ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ nke edoziri na ogo 70 maka ezigbo epulite etolite. Ndị tinyere kpọmkwem n'ime ala a ga-akụ ya mgbe ala bụ mgbe niile n'elu 50 degrees.
Nwere ike ịhụ n’ụzọ dị mfe otu esi akụ osisi sitere na rhizome ya.
Ya mere, ugbu a bụ oge iji kwurịta otu esi eto ginger! Ka anyị kwuo banyere ọnọdụ dị mma maka ịkọ ahịhịa na-atọ ụtọ. O siri ike imebi ndụ site na mgbọrọgwụ ginger gị.
Gmụaka na-eto eto na-amata nke ọma na anwụ anwụ. Jide n'aka na ọ na-enweta 2-5 awa nke dappled ma ọ bụ anọ ọkụ kwa ụbọchị. Gbalịa izere mgbe niile ọkụ na anwụ na-acha mgbe ọ bụla enwere ike.
Rhizom gị ginger na-anabatacha ọnọdụ oyi. Ozugbo ala malitere ifriizi, ginger rhizome gị nọ n'ihe egwu. Ọ bụrụ na ị na-emeri ha, jiri nlezianya gbanye ha n'ime ite ma weta ha n'ime ụlọ ebe ihu igwe na-ekpo ọkụ karị.
Ginger-osisi toro eto ’osisi ka chọrọ ịnweta ọkụ, ọbụlagodi n’oge ọnwa oyi. Ọ naghị ewe ihe niile, mana nye ọkụ na-eto eto ma achọrọ ya.
kedu ihe ebube gro mere
Mmiri bụ ihe dị oke mkpa maka ginger. Debe ala mgbe niile na nracha mmiri mgbe niile, ekwekwala ka ọ kpoo. Nwayọọ, ọbụlagodi ịgbara mmiri bụ nhọrọ kachasị mma, ebe ọ na - enye ala ohere ịmịnye mmiri karịa ma ọ bụrụ na ị na - egwu ya. A usoro soaker sooks na-abụkarị nke zuru okè.
Jinja na-ahọrọ gburugburu mmiri. O doro anya na ọ ga-enwe ihe dịka 50-60% iru mmiri gburugburu gburugburu osisi ahụ oge niile. Ọ bụrụ na ọ bụ n’èzí, itinye osisi mgbawa osisi mulch gburugburu osisi ga-amụba iru mmiri iru mmiri ruo mgbe mmiri evaporates. Ighota ahihia na enyere aka. Ihe eji eme ihe dika ihe nwere ike inwe okwute pebble na mmiri etinye n’okpuru iji nyere aka me ka iru mmiri gburugburu.
Jinja chọrọ ala acidic ka ọ too wee kwe ka rhizomes zụlite n'ụzọ zuru ezu. Ezigbo ala pH sitere na 5.5-6.5. Soildị ala kachasị mma bụ loamy na aja. Ma loamy na aja aja na-agbasaghị ma na-ekwe ka ngwa ngwa ngwa ngwa ma na-ejidekwa mmiri maka mgbọrọgwụ iji guzobe nke ọma. Ngwakọta nke abụọ ga-arụ ọrụ nke ọma.
Ihe kachasị mkpa maka ngwakọta ala bụ inwe ike ijide mmiri ka ọ dịrị maka rhizomes. Tinye compost tupu ị kụọ oge, ebe ọ nwere ike ịmịkọrọ ma jigide mmiri maka rhizome gị.
Ọ bụrụ na gị na ubi nwere elu-etoju nke ụrọ siri ike , ọ nwere ike isiri ike maka mgbọrọgwụ ginger ịbanye n'ime ya mgbe ọ na-eto eto. Gbakwunye ihe ndị ọzọ na-eme ka ịtọpụ ya ka ọ dị mma maka osisi gị.
A edozi 5: 5: 5 NPK fatịlaịza zuru okè n'ihi na gị ginger. Tinye fatịlaịza na ala gị ụbọchị ole na ole tupu ị kụọ, ma soro ntuziaka ndị na-emepụta oge iji tinyekwuo. Ọ bụ n'ozuzu ọnwa ọ bụla maka fatịlaịza nwayọ nwayọ.
Ọ bụ ezie na ị nwere ike iji fatịlaịza mmiri na-etinye oge ụfọdụ, oge ka ukwuu ha anaghị adị mma dịka fatịlaịza na-edozi ahụ ga-abụ maka ginger gị. Kwesịrị iji fatịlaịza mmiri mmiri, tinye ya kwa izu 2-4.
Dị ka ọ dị na ọtụtụ perennials, ginger kwesịrị ịkpụcha ya na mmalite oge opupu ihe ubi. Nke a bụ ezigbo oge dịka enwere ọtụtụ okpomọkụ na iru mmiri nke na-enye ohere ka osisi ahụ gbakee ngwa ngwa. Gbalia igbachapu ndi nwuru anwu na onwu tutu uto ohuru aputa.
Zọ kachasị mma iji belata ginger bụ site na ịkpụ osisi ndị na-eto ala afọ gara aga. Imirikiti ginger naanị okooko osisi na mkpanaka afọ abụọ. Jiri ọcha na enweghị mmasị na ịkwa osisi ma kpochapu ahihia nke di na osisi. Ebe ọ bụ na osisi ndị a na-eme naanị na-emepụta okooko osisi otu ugboro tupu ha anwụọ, ịmịpụ ahịhịa ochie ndị a ga-eme ka osisi gị maa mma.
A na-agbasa mgbasa ozi site na ikewa rhizomes. Mgbe ị na-ewe ihe ubi ginger, họrọ rhizome mara mma nke nwere ọtụtụ ọnụ na ya. Ọ sitere na ọnụ ndị ahụ ka okporo ọka ga-epu.
Nyochaa rhizome gị nke ọma. Ghichaa obere iberibe nwere akara 2-3 na ha site na iji mma dị nkọ. Debe ndị a n’ebe dị jụụ ma kpọọ nkụ ka ọ dịkarịa ala ụbọchị abụọ. Ka oge na-aga, ihe a na-egbutu ga-akpọnwụ ma mepụta ụda olu, na-ebelata ohere ire ere.
Ozugbo akpọnwụwo, họrọ ebe nwere eleghị anya na ndo zuru oke n'ubi gị ma kụọ mkpụrụ mgbọrọgwụ ginger. Mmiri gị rhizomes ọma. E kwesịrị ịme mmiri ugboro ugboro ruo mgbe ginger na-amịpụta ome.
A gaghị enwe ike iji ginger na-eto site na iji mkpụrụ. Naanị ya na-amalite site na iberibe rhizomes.
Osisi ginger ohuru nke ejiri osisi gbara osisi. Ebe e si nweta ya: Sengai Podhuvan
Ọ bụrụ na ị na-eche mgbe ị ga-ewe ihe ubi ginger, lee nduzi ngwa ngwa. Anyị ga-enyere gị aka ịnakọta ma chekwaa mgbọrọgwụ ginger gị na-atọ ụtọ!
Ginger gị ọhụrụ kwesịrị ịdị njikere na mgbụsị akwụkwọ ma ọ bụrụ na ị kụrụ na mmiri. Jiri nlezianya kpoo ala gburugburu osisi ginger gị na-eri nri ma bulie ya elu. May nwere ike ịhụ mgbọrọgwụ dị gịrịgịrị nke na-eto n'etiti rhizomes. Ma ọ bụ na-ewe ihe ubi ahụ ginger ọhụrụ ị chọrọ ugbu a ma hapụ mgbọrọgwụ ndị ọzọ ka ị nọgide na-eto, ma ọ bụ wepu rhizomes niile n'otu oge.
Gị ginger kwesịrị iguzosi ike na aka. Ọ bụrụ na ọ bụ mushy, ọ nwere ike ịdaba ire ere ma ọ bụ ahụhụ, ma ekwesịghị iri ya ma ọ bụ chekwaa ya.
Enwere ike ịchekwa nnukwu ginger dị ka 'aka' na akọrọ, ebe dị jụụ ma ọ bụrụhaala na ọ nwere akpụkpọ ahụ ya. Jide n'aka na idebe ya kpamkpam maka nchekwa kachasị mma. Ọ ga-anọru otu a ruo izu ole na ole ma ọ bụrụhaala na ọ na-akpọ nkụ na ọchịchịrị. Akpa akwụkwọ na-arụ ọrụ nke ọma maka nke a.
ihe bụ ihe kacha mma sooks ukwu
Maka nchekwa dịte aka, gbachapụ anụ ahụ na mgbọrọgwụ ma hichaa ha ma ọ bụ bee ha na mpekere ndị dị mkpa. Enwere ike ịchekwa ndị a na friza. Ọ na-amasi m ị teaspoonụ ihe ọ teaspoonụ teaspoonụ obere obere ngaji n’ime obere ebe a na-agba ice iji kpụkọta obere obere mmiri iji kekọta ha ọnụ, ebe ọ bụ na nke a na-enyere m aka iji ha esi nri. Ozugbo oyi zuru oke, tinye cubes ginger a n'ime akpa friza.
A na-etolite ụfọdụ ginger maka ifuru ya na akwụkwọ ya karịa mgbọrọgwụ ya.
Ginger na-eto eto dị mfe mana enwere nsogbu ole na ole ịchọrọ ịzere. Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma.
Zere ị -ụbiga mmiri ókè ginger. Oké mmiri nwere ike ime ka ọ ghara ịmalite ire ere. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ naghị ere ure, mgbọrọgwụ agaghị adị ụtọ ma ọ bụrụ na ha nwere oke mmiri.
Ndị bi na udu mmiri dị elu kwesịrị iwebata osisi ha n'ime ụlọ ma ọ bụ owuwe ihe ubi tupu ihu igwe erughị ogo 50 Fahrenheit. Speciesdị a anaghị anabata ihe ọ bụla Oyi kpọnwụrụ ma ọlị.
Anyị na-ahụ ginger ka ọ dị ụtọ. O di nwute, otú a kwa pests.
Otu n’ime ihe ndị kacha echegbu onwe ya bụ mgbọrọgwụ eriri nematodes . Ahụhụ ndị a nwere ike imebi rhizomes gị. Tinye nematodes bara uru na ala gị iji kpochapụ ihe ọjọọ.
China gbara enwe buru ibu, agba aja nke ga-eri akwụkwọ osisi gị niile. Ha bụ abalị, yabụ na ị gaghị ahụ ha ruo mgbe chi jiri. Nwere ike pụọ ma were ha na osisi gị na a headlamp, ma ọ bụ ịgba na were mmanu iji belata mkpesa nke epupụta.
Mealybugs na akpịrịkpa dị nro ga-edozi na ị ga na n'okpuru epupụta. Jiri akwa owu tinye n’ime mmanya iji wepụ ihe ndị a.
Ugbo agha , ohia , na ọdo wooly bear ẹphe ime akwukwo emebi dika China rose na eme. Ngwurugwu bacillus thurigiensis ga-ekpochapụ ndị a.
Ọzọkwa, ackingụ ahụhụ dị ka aphids , Ududo uhie , doro anya thrips , na funn anwụnta nwere ike wakporo epupụta ma ọ bụ ala gburugburu osisi. O yiri ka ọ bụ ọgwụgwọ a họọrọ maka ndị a. Ọ bụrụ na ha anọgide na-aga, jiri ncha ahụhụ na pyrethrin wepu ahụhụ ndị a.
Jinja dịkwa nfe nke nje na-akpata ma mgbọrọgwụ ire ere. Nje nje bacteria ga na-akpata mmiri-tinye ntụpọ na curled elu epupụta. Nanị ụzọ ị ga-esi gwọọ ya bụ iwepụ ahịhịa na ahịhịa mebiri emebi ma jiri nlezianya nyochaa osisi niile maka ihe ịrịba ama ma ọ bụ ihe mgbaàmà ọ bụla. Tinye ihe ogwu na-egbu egbu ma ọ bụ ọgwụ na-egbu egbu dị ka ọ dị mkpa.
ala nkpuru osisi na-acha odo odo okooko osisi
Otu ugboro mgbọrọgwụ ire ere amalite, enweghi ike ichekwa uzo rere ure nke rhizome. Nke a fungal-kpatara ire ere a na-ahụkarị na ala dị oke mmiri. Bipu ebe rere ure, kwe ka rhizome kpoo, kua ya dika o buru nke ohuru. Lelee ka ị hụ ma ị ga-epulite ọhụrụ.
Akụkụ ndị na-eto eto na rhizome a bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị chara acha.
Q: Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji ginger?
Azịza: Mgbe ị kụrụ akụkụ nke rhizome gị, ọ nwere ike were ọnwa 8-10 ka osisi ahụ too ma tozuo ..
Q: Ogologo oge ole ka ginger na-eto?
A: Ọ nwere ike iru ogo 3 n'ogologo ya dị ka osisi ifuru ya.
otu esi eji ọbara na ọkpụkpụ n'ime ogige
otú na-eto eto ahuhu mkpụrụ osisi vaịn
jụụ iyuzucha ofufe maka eto ụlọ